Neymar JR Oo CODSI Cusub U Diray Madaxda Barcelona, Waxa Uu Ka Doonayo Inay Sameeyaan & Xaaladii Ugu Dambaysay Ee Heshiiska Uu Camp Nou Ugu Soo Laabanayo. - Gool24.Net
Neymar JR Oo CODSI Cusub U Diray Madaxda Barcelona, Waxa Uu Ka Doonayo Inay Sameeyaan & Xaaladii Ugu Dambaysay Ee Heshiiska Uu Camp Nou Ugu Soo Laabanayo.
Haddiiba ay Real Madrid toddobaadyo kahor qabsatay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda isla markaana ay soo xero-galisay xiddigo 300 Milyan ku qiimaysan haatan Barcelona ayaa ah mida kasoo muuqanaysa boggaga hore ee saxaafada.
Waxa maalinba meel iyo xog cusub kasoo baxayaan wararka sheegaya in xiddiga Paris Saint-Germain ee Neymar uu kusoo laabanyo Barcelona si lamid ah xaaladii uu ku jiray laba sano kahor markii uu caasimada France u socday.
Sidoo kale iyadoo ay meesha saarantahay qaabka ay Barcelona ula soo wareegayso Antoine Greizmann oo uu haatanba muran ka dhashay ayaa sidoo kale wali lala xidhiidhinayaa Neymar.
Dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha Barcelona ee Josep Maria Bartomeu uu ka faalooday arrimaha Neymar isaga oo sheegay in xiddiga ree Brazil uu doonayo kusoo laabashada kooxdooda balse aysan PSG sahal ku fasaxayn.
Erayadaas kasoo yeedhay madaxweynaha Barca ayaa ah mid albaabada u furaya soo laabashada 27 jirkan sida haatan laga soo xigtay wargeyska Sport-na Neymar ayaa wacay madaxda kooxdiisii hore oo uu arrin ka codsaday.
Codsiga Neymar ee soo gaadhay madaxda Barca ayaa ah inuu u sheegay inay dedejiyaan isla markaana dar dar geliyaan wada xajoodka ay kula jiraan Paris Saint-Germain si arrintiisa xal buuxa looga gaadho.
Inay si dhakhso ah u bilaabmayaan kulamadii ka horreeyay xilli ciyaareedku oo ay soo dhammaanayaan fasaxyadii xagaagu ayaa xiddigan ka dhigaysa mid codsada in waxkasta deg-deg loo dhammeeyo.
Qareenka Neymar JR oo ahaa midkii loo xilsaaray inuu wareejiyo lacagtii 222 Milyanka ahayd ee uu xiddigani ugu wareegay France ayaa haatan fasaxiisa ku qaadanaya magaalada Barcelona waana arrin shaki badan abuuray.
Neymar ayaa soo aqbalay mushahar dhimis, Inuu raali gelin bixiyo iyo qoddobo kale oo ahaa shuruudo ay Barcelona hordhigtay balse haatan waxkasta ayaa ku xidhnaan doona wadahadalo dhex mara labada kooxood.